Daawo: Shacabka Hirshabeele oo go’aansaday iney iska dulqaadaan argagixisada Shabaab - Latest News Updates
Daawo: Shacabka Hirshabeele oo go’aansaday iney iska dulqaadaan argagixisada Shabaab
Isku filnaashaha iyo isku xirnaanta bulshada kasoo jeeddaa deegaamnada gobalka Shabellaha dhexe wuxuu gaaray in ay maalin cad ay ku dhawaaqaan in ay garaysteen sida ay isaga dulqaadi lahaayeen qolyaha nabad’diidka .
Muuqaalllada ay nala wadaageen qaar kamida shacabka kasoo jeeda gobalka,waxeey muujineeysaa in bulshooyinka kale ay tusaale ku filan u tahay sida qolyaha cadawga ah aan u awoodno in aan midnimadeena isaga sifeeyn karno qolyaha cadawga ku ah horumarka deegaannadeena.
Shacabka Hirshabelle State waxaan lawadaagayaa in ay muujiyaan midnimadooda iyo horumarinta deegaannadooda.
Dowladda Hirsbabelle waxeey utaagan tahay gacan siinta iyo garab qabashada shacabka kasoo jeeda, waxeeyna bogaadineeysaa kor uqaadidda isku tashi ay muujiyeen qaar kamida shacabka kasoo jeeda Hirshabelle.
Dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ku amaantay qaar kamida bulshada shabellaha dhexe ee ku dhawaaqay ladagaallanka Shabaab.